सामसु G गियर S2, बजारमा उत्तम स्मार्टवाच? | Androidsis
सामसु G गियर S2, बजारमा उत्तम स्मार्टवाच?
अल्फोन्सो डे फ्रुटोस | | IFA, समीक्षा, Samsung, Smartwatch
बजारमा हिट गर्ने पहिलो स्मार्टवाचहरू उनीहरूको डिजाइनको लागि विशेष उल्लेखनीय थिएन। मोटोरोला र यसको साथ मोटो 360 XNUMX० परिवर्तन गरिएका चीजहरू। बजारमा पहिले र पछाडि चिन्ह लगाईएको गोलाकार स्क्रिनको साथ एक घडी। र अन्तमा Samsung यस प्रकारको डिजाईनको लागि रोजेको हो।
जब हामीसँग परीक्षण गर्ने मौका थियो सैमसंग गियर S2 बर्लिनमा आइएफए को अन्तिम संस्करण मा, सनसनीहरु अपराजेय थिए। कोरियाली कम्पनीको पहिलो गोलाकार स्मार्टवाच स्टोम्पिंग आउँदछ र, मेरो विचारमा यो उत्तम विकल्प हो यदि तपाई क्वालिटी वाच हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो फिनिशको साथ र सबैभन्दा माथि वास्तवमै आकर्षक सफ्टवेयरको साथ।
Tizen साथ Samsung गियर S2
गियर एस २ वास्तवमै यसको लागि बाहिर खडा छ सुरुचिपूर्ण र सफा डिजाइन। एक उपकरण जो स्पर्शको लागि रमाईलो छ र त्यो पहिलो नजरमा परम्परागत घडी जस्तो देखिन्छ। केहि चीज जुन म व्यक्तिगत रूपमा कदर गर्छु। थप रूपमा, सामसुले डिजाइनको मात्र ध्यान लिएको छैन।
यसको एउटा नमूना उहाँको हो सुपर AMOLED प्रदर्शन त्यो वास्तवमा राम्रो शार्पनेस प्रदान गर्दछ, अधिक यदि हामी विचार गर्दछौं यसको गोलाकार स्क्रिन १. is इन्च छ जुनa1.2० x 360 360० पिक्सेलको रेजोलुसनको साथ छ। थप रूपमा, सामसु्गले एक क्षेत्र एकीकृत गर्‍यो जसले हामीलाई स्क्रिन गिलास छुने बिना नै बिभिन्न विकल्पहरू मार्फत सार्न अनुमति दिन्छ। यस प्रकारले यो ट्रेसले भरिने छैन किनकि यो प्रतिस्पर्धाको घडीहरूसँग हुन्छ।
प्राविधिक दृष्टिले यो यसको प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा फरक छैन: डुअल-कोर प्रोसेसर, 512१२ एमबी र्याम, GB जीबी आन्तरिक भण्डारण, पानी प्रतिरोधी ... स्मार्ट वाचको लागि विशिष्ट। चाखलाग्दो बिन्दु तपाईंको अपरेटिंग प्रणालीको साथ आउँदछ। र के यो सैमसंगले आफ्नो समाधानमा शर्त लगाउने निर्णय गरेको छ, Android Wear बाट भागेर। यस अवस्थामा निर्माताले यसको सफ्टवेयर प्रयोग गरेको छ Tizen, जुन हामी प्रमाणीकरण गर्न सक्षम छौंबाट, एकदम पूर्ण ओएस हो।
हामी भ्वाइस कमाण्डहरू मार्फत विभिन्न प्रकार्यहरू सक्रिय गरेर वा एस स्वास्थ्य, मेरो उपकरण फेला पार्नुहोस्, जस्ता अनुप्रयोगहरू सक्रिय गरेर हामी हाम्रो फोनसँग कुराकानी गर्न सक्छौं। नाइके + चालु अन्य विकल्पहरूको बीचमा।
साथै यदि तपाईं आफ्नो फोन आफूसँगै लैजान चाहनुहुन्न भने एक छ Version जी संस्करण यसले सिम कार्ड स्लट समावेश गर्दछ र तपाईंलाई फोन लि the्कको आवश्यकता बिना नै सामसु G गियर S2 लाई स्ट्यान्डअलोन वाचको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ।
सैमसंग गियर S2 को लागी आशा गरीन्छ अक्टुबरको महीनामा मार्केटमा हिर्काउनुहोस् पारंपरिक संस्करणको 349 449eर 3G XNUMX XNUMX जडानको साथ मोडेलका लागि ur XNUMXeको मूल्यमा।। हामीले यस घडीको स्वायत्तता जाँच्न पर्खनु पर्नेछ, एउटा पक्ष जसमा यस प्रकारको उपकरणले धेरै लिम्प गर्दछ, हेर्नका लागि कि यसले दिनहुँको आवश्यकता पूरा गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » सामसु G गियर S2, बजारमा उत्तम स्मार्टवाच?
सर्जियो एक्सडी भन्यो
सर्जियो एक्सडीलाई जवाफ दिनुहोस्
फ्रान् बाबा भन्यो
सिम स्लट। कृपया लेख लेख्नु अघि आफैंलाई सूचित गर्नुहोस्। यो E-Sim को साथ एक संस्करण हो र त्यसैले यो स्पेनमा उपलब्ध हुने छैन जबसम्म EU ले यो प्रणालीलाई अनुमति दिदैन। जे भए पनि ...
फ्रान्स papasito जवाफ
R9 Darkmoon, यो डुअल स्क्रिनको साथ नयाँ Siswoo फोन हो
विको इंद्रधनुष जाम, inches १ inches इन्च HD रेजोलुसन € १ than० भन्दा कमको लागि